Baarlamanka Puntland oo su’aalo ka keenay miisaaniyad KMG ah oo maaliyadu geysay – Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Baarlamanka Puntland oo su’aalo ka keenay miisaaniyad KMG ah oo maaliyadu geysay – Dhegayso
Baarlamanka Puntland oo su’aalo ka keenay miisaaniyad KMG ah oo maaliyadu geysay – Dhegayso
Posted: Abdirizak Shiino - February 11, 2014
Wasaarada maaliyada Puntland ayaa maanta horgaysay baarlamanka miisaaniyad KMG ah oo loogu talo-galay in lagu sii shaqeeyo bilaha soo socda, in kastoo xildhibaanadu su’aalo weydiiyeen wasiirka cusub shire xaaji faarax.
Xildhibaanada baarlamanka ayaa wasiirka weydiiyey sababta loo keeni waayey golaha miisaaniyad dhamaystirsan, wasiirka ayaase sheegay in ay taalo miisaaniyadii hore loo dejiyey, balse qorshahoodu yahay inay si dhaqso ah u keenaan miisaaniyad dhamaystirsan.
$3.272.000 kun oo dollar ayaa maaliyadu maanta horgaysay baarlamanka, sida uu saxaafada u sheegay agaasimaha guud ee wasaarada Cabdirisaaq Maxamed Xasan oo cadeeyey inay tahay mid saddexx biloodle ah.
“Duruufo jira awgood ayaa sababay in la samayn waayo miisaaniyadii sanadka 2014.” Ayuu yiri agaasimaha maaliyada.
Docda kale, Baarlamanka ayaa maanta ku dooday in aan si rasmi ah loo hirgelin miisaaniyadii hore, xildhibaanada ayaa xusay in shaqaale badan oo ka tirsan dowladda aysan mushaarkii helin.
“Mushaarka waa lagu dadaalaya bixintooda hadii alle idmo, bishii janaayo waa la bixiyey sidaas ayaana rajaynaynaa bilaha soo socda.” Agaasimaha guud ee wasaarada maaliyada ayaa intaas ku daray in ay soo bandhigi doonaan miisaaniyad hagaagsan.
“Agaasimaha wasaarada maaliyada Cabdirisaaq Maxamed Xasan oo saxaafada u waramay
Wasaarada maaliyada Puntland ayaa baarlamanka ka codsatay in ay dhaqan geliso miisaaniyada saddexda bilood ee sanadka ugu horeeya oo ah mid KMG ah lagana soo min guuriyey tii sanadkii hore ee 2013.